Maxay yihiin odayaashii maanta lagu dilay Suuqa Bakaaraha? | Dhacdo
Maxay yihiin odayaashii maanta lagu dilay Suuqa Bakaaraha?
Laba nin oo oday dhaqameedyo ahaa ayaa maanta lagu dilay Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho, iyadoona ay dileen rag bastoolado ku hubeysnaa.
Ciidamada Booliska ee Suuqa Bakaaraha ayaa ku guuldareystay inay gacanta ku soo dhigaan raggii bastooladaha ku hubeysnaa ee dilka gaystay.
Odayaasha oo lagu kala magacaabi jiray Nabadoon Axmed Sheekh Cabddullaahi Fiqi Cumar iyo Nabadoon Axmed Suldaan Muxumud Suldaan Aadan ayaa dhawaan ka yimid Gobolada Dhexe.
Odayaasha ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in ay ka yimaadeen deegaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug, oo dhawaan ay ka dhaceen dagaalo ay ku qaadeen maleeshiyada Ururka Al Shabaab.
Mahad Cabdalla Cawad, Gudoomiye Kuxigeenka 2aad ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya oo ka tacsiyadeeyay dilka odayaasha ayaa dhanka kale iftiimiyay in ay iska diideen inay u hoggaansamaan awaamiirta Al Shabaab.
“Waxaan tacsi u dirayaa qoyska iyo ehelka Axmed Suldaan Muxumud Suldaan Aadan iyo Nabadoon Axmed Sheekh Cabdullaahi Fiqi Cumar, oo ahaa odayaal dhaqan oo lagu dilay Muqdisho maanta, iyaga oo ahaa dadkii hore u diiday inay ku shaqeeyaan amarka Al Shabaab.” Ayuu yiri Gudoomiye Kuxigeenka oo warkan ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa xiriirka dadweynaha.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa dhawaan ku hanjabay in ay la xisaabtami doonaan dadka u hoggaansama awaamiirta mintidiinta Al Shabaab.
Madaxweynaha oo Talaadadii Magaalada Gaalkacyo kaga qaybgalay munaasabad lagu xusaayay Saraakiishii Militariga ee lagu laayay ismiidaamintii 18-kii bishii December ka dhacday Koonfurta Gaalkacyo ayaa yiri “Waxaan rabnaa argagixisada kuwa dhibaatadooda buunbuuniya, kuwa farriimahooda u hoggaansamo oo ogolaada fariimahooda inay maqlaan ama dalabkooda yeela, iyagoo ama naf yar xeeleysanaya oo naf is leh armaa adiga si gaara kuu dhibaan ama qaarkood xitaa danno raqiisa ka leeyihiin, waxay noola mid yihiin Shabaab.”
Madaxweyne Qoorqoor ayaa sidoo kale yiri “Dad waxaad arkeysaa dhahaya Shabaab baa meel hebla soo galay, Shabaab baa saas yeelay, waa maanlaawe-yaal aan garaneyn waxa ay ku hadlayaan. Wuxuu rabaa cadowgaas in dadka u xayeeysiiyo ama dadka iidheh u sameeyo, isagoo si xun u fekeraya. Shabaab meeshii ay soo galaan iyo meeshii yimaadaan, si in la’iska qabto uun baa isugu sheegeynaa ee uma samayneyno, loomana samayn karo wax u eg dadka in lagu qalqal-geliyo. Farriimahooda iyo dalabkooda lama aqbali karo, loomana hoggaansami karo.”
Qoorqoor ayaa intaasi ku daray “Kii xoolo bixiya, kii waqti ku bixiya iyo kii u tagga, dhibaatada ay dadka u gaysanayaan buu qayb ka yahay, dadkuuna dhinaciisa ka dhibayaa, sidaasaana rabnaa in loola xisaabtamo.”
Hase ahaatee Madaxweyne Qoorqoor ayaan soo bandhigin wax qorshe ah, oo ay dadka uga difaacayaan dhibaatada kaga imaan karta kooxaha argagixisada.
Shabaabka hubeysan ee dalka ka dagaalama waxaa lagu tilmaamaa cadowga keliya ee muuqdo, ay maanta ummadda Soomaaliyeed leedahay, iyagoona beegsi joogto ahi ku haya dadka kuwooda indhaha u ah iyo cid kastoo awaamiirtooda diidda.